Onyinye ego inye ego - Cazoo
Mbido » Mbido » Ego na Binance ụgwọ
Tag: Binance, Ntughari Binance, Binance Ntuziaka ID, Binance Ntuziaka Usoro, Ntuziaka Code
Azụmaahịa ọ bụla, ọrụ ego ọ bụla a na-eme na Binance, onye kasị ukwuu na mgbanwe n'ụwa taa, nwere ego, ọrụ, a ego. Ọ bụrụ nenyeghị aha na Exchange a ị nwere ike iji koodu ntinye m mee ya https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5 (Ntuziaka id: EV6X8DW5) na ị ga-enwe 20% ego isslọrụ ozugbo, ruo mgbe ebighị ebi. Gịnị mere?
Binance bụ igba egbe na mpe mpe akwa n'ihi na m, karịsịa na-achọpụta na Binance Smart yinye na ya DeFi dapps. Ọ bụrụ na mama m gụọ ahịrịokwu a ọ ga - asị: "you na - egwu m?". Ọ bụrụ na ị na-eche kwa, soro njikọ dị na elu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji ghọta ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Crypto ị maara na onye ọ bụla na-ekwu maka ya na-ekwu, sị: Abụghị m onye ndụmọdụ ndụmọdụ ego! Dọ aka na ntị! Ya mere a na m agwa gị nke a kwa, kpacharakwa anya: abughi m onye ndụmọdụ ego. Anaghị m enye ndụmọdụ ọ bụla gbasara otu esi etinye ego gị, anaghị m ekwe nkwa nnwere onwe akụ na ụba gị ma ọ bụ Lambo na oghere ụgbọ ala. Itinye ego n’ego na etinye ego gi oge nile, ikwesiri ima banyere ya nke oma.
Isiokwu bu nke aMkpụrụ ego Binance (BNB): Ihe akaebe nke nwa amaala nke kasị ukwuu mgbanwe crypto na ụwa
Isiokwu ọzọBinance: Nyefee kredit ozugbo na nnyefe waya SEPA
Etu esi ewepu ugbo na Liquid Swap na Binance